कर्पोरेट Archives - Page2of 17 - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द !
पोखरा महानगरपालिकाले ‘कर नतिरेको’ भन्दै बुधबारदेखि प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने भएको छ । पोखराको आकासमा दिनदिनै प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएकै बेला महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो । पोखरा महानगर र प्याराग्लाइडिङ उडान हुने वडा कार्यालयले करको विषयमा सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेर कर बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि महानगर र वडा कार्यालयले उडान नै बन्द गर्न लागेको हो । ‘महानगरले गत...
मुक्तिनाथ केबुलकार प्रालिले विश्वकै लामो यात्रुवाहक केवुलकार निर्माण गर्ने
मुक्तिनाथ केबुलकार प्रालिले विश्वकै लामो यात्रुवाहक केवुलकार निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसको लागि कम्पनीलाई लगानी बोर्ड नेपालले अनुमति समेत दिइसकेको छ । कम्पनीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिका अनुसार नेपालको इतिहासमै, नेपाली निजी क्षेत्रको मात्र जारी पूँजी लगानीमा निर्माण हुन लागेको मुक्तिनाथ केवुलकार परियोजनामा आइडिया फर नेपालले पनि लगानी गर्ने सहमति भएको छ । आइडिया...
टोकियोमा,जापानी विज्ञहरुको सहभागितामा, नेपाली व्यवसायी लक्षित सेमिनार सम्पन्न
टोकियो । जापानमा ब्यवसाय गरिरहेका तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको लागि ईन्सुरेन्स, लगानी, भिसा लगायतका विषयहरुमा सजिलोसँग बुझाउन विज्ञहरुसँग अन्तरक्रियात्मक सेमिनार सम्पन भएको छ । नेपाली ब्यवसाय संघ जापानको आयोजना तथा एनआरएनए जापानको सह-आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रिया सहितको सेमिनारमा जापानमा रहेको नेपाली लगानीकर्ताको व्यवसाय कसरी बढाउन सकिन्छ ? जापानको करप्रणाली एवं जापानले विदेशीलाई दिने भिसा प्रकृया, बैङबाट लिन सकिने ऋण...
नेपालमा लगानी भित्र्याउन जापानवासी नेपालीहरुको पहल, एनआरएनए जापान र दुतावासद्वारा जानकारी सेमिनार आयोजना
टोकियो । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानी वारे जानकारीसहित लगानी कर्ताहरुलाई समेटेर जापानमा जानकारीमुलक लगानी सेमिनार सम्पन्न भएको छ । आगामी मार्च २९ र ३० तारिकमा काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा जापानबाट अत्याधिक लगानी भित्र्याउन जापानस्थित नेपाली दुताबास र गैरआवासीय नेपालीले तयारी थालेको हो । टोकियोमा मंगलबार आयोजित तयारी भेलालाई राजदुत प्रतिभा राणा र एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।...
राजदुतावास, एनआरएनए जापान तथा एनविएको पहलमा हुने व्यवसायिक सेमिनारको तयारी अन्तिम चरणमा, सहभागीहरुको नामदर्ता कार्य जारी
टोकियो । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानी सम्बन्धि सेमिनारमा, जापानी तथा नेपाली लगानी कर्ता हरुको उल्लेखनिय सहभागिताको लागि नेपाली राजदुतावास बाट बिषय बस्तु जानकारी सहित लगानि कर्ताहरुलाई समेटेर यहि फेब्रुअरी ५ मा आयोजना गरिने व्यवसायीक जानकारीमुलक कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले यहि मार्च २९ र ३० तारिक काठमाण्डौमा बैदेशिक लगानी सम्वन्धि सेमिनारको आयोजना गर्दैछ, सो सेमिनारको लागि...
अमेरिकाले हालेको मुद्दा हुवावेद्वारा अस्विकृत
ऐजेन्सी । चिनियाँ मोबाइल कम्पनी हुवावेकी प्रमुख फाइनान्सियल अफिसर मेङ्ग वाङ्जुले अमेरिकाले आफुविरुद्द हालेको मुद्दा अस्विकृत गरेको छ । हुवावे कम्पनीमाथि अमेरिकाले बैंक ठगी, न्यायमा अवरोध एवं अमेरिकन प्रविधिको चोरी गरेको आरोप लगाएको थियो । कम्पनीले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै हुवावे मोबाइल कम्पनीले प्रमुख फाइनान्सियल अफिसर मेङ्ग वाङ्जुमाथि लागेको आरोप समेत गलत रहेको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकाले चिनियाँ मोबाइल...
कहाँ हराए १, २, २५ र २५० का २५ करोड नोट?
हामीले एक, दुई, २५ र २५० रुपैयाँका नोट नदेखेको वर्षौं भयो। यी नोट कसैको संग्रहमा होलान्, बजारमा चलनचल्ती भने छैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने यी दरका २५ करोड ६३ लाख ८९ हजार ९ सय ५० वटा नोट चलनचल्तीमा रहेको देखाउँछ। यो तथ्यांकका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने यी नोटको मूल्य ४९ करोड ११ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ। तथ्यांकअनुसार एक रूपैयाँका १६...
सिटी एक्स्प्रेसबाट पैसा पठाउँदा, मान बहादुर खत्रीले पाए १२ लाख रुपैँया, यस्तो थियो पुरस्कार हस्तान्तरण समारोह ( भिडियो सहित)
टोकियो । सिटी एक्सप्रेस लखपति स्किमको १२ लाख पुरस्कार जापानमा कार्यरत मान बहादुर खत्रीले प्राप्त गरेका छन् । जापानबाट रकम पठाउँदा बर्दियाका मान बहादुर खत्रीले १२ लाख नगद पुरस्कार जित्न सफल भएका हुन् । खत्रीले ,सिटी एक्सप्रेस लखपती स्किम अन्तर्गत लक्की ड्र मार्फत सो बम्पर उपहार पाएका हुन् । दुइ साता अगाडी सिटि एक्सप्रेसले काठमाडौँमा प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डन र ब्राण्ड...
अलिबाबाका कार्यकारी अध्यक्ष ज्याकमा भन्छन् -दबावको डर छ भने नोकरी नै गर्नुस्
काठमाडौं । स्वीटजरल्याण्डको डाबोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं बैठक जारी छ, जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भाग लिएका छन् । त्यही बैठकमा सहभागी छन् चीनको ई-कमर्स कम्पनी अलीबाबाका कार्यकारी अध्यक्ष ज्याकमा पनि । चिनियाँ नागरिक ज्याक मा एसियाकै धनाड्य व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो सफलताको सूत्रबारे डाबोस बैठकमा जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘यदि बिजनेसमा दबावको डर...
संसारका करोडौं मानिसहरु क्यान्सरबाट पीडित छन् । क्यान्सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रोग हो । तर रुसी वैज्ञानिक ह्रिस्टो मेर्मेर्सकीले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचार पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । रुसका वैज्ञानिक ह्रिस्टोले घरमै बनाउन सकिने यस्तो औषधी पत्ता लगाएका छन्, जसको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका प्राणघातक क्यान्सर रोगबाट बचाउन सन्छ । औषधी तयार बनाउन चाहिने सामग्री ! जानी राखौ :- ४०० ग्राम ताजा...